ဒူဒူကြီး: August 2012
Safety valve - control valve နဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီး၊ circuit အတွင်းမှ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor တိုင်းမှာ safety valve တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor ဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုများပြားတဲ့ဝန်အပို 'excessive load' ကို ထမ်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ abnormal high-pressure fluid ကို safety valve မှ၊ လျှော့ချပေးပါတယ်။ သာမန် ordinary hydraulic circuit တွေမှာ abnormal high-pressure အနေနဲ့ မြင့်တက်လာလာမယ့် hydraulic fluid ကို၊ small relief flow rate ဖြင့်စီးဆင်းလျှော့ချပေးရန်၊ safety valve တွေကို direct acting valve အဖြစ်၊ တည်ဆောက် အသုံးပြုပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ hydraulic circuit တွေမှာတော့ large relief flow rate ဖြင့်စီးဆင်းလျှော့ချပေးရန်၊ safety valve တွေကို pilot valve အဖြစ်၊ တည်ဆောက်အသုံးပြုပါတယ်။ safety valves တွေမှ low peak pressure ဖြင့်လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor တို့မှာသက်ရောက်လာမယ့်၊ excessive shock ကိုကာကွယ်ပေးသလို၊ excessive load ကိုထမ်းဆောင်နေစဉ် relief flow rate ကို ထိမ်းသိမ်းကာလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်၊ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor တို့မှာ ထမ်းဆောင်ထားရတဲ့ ဝန်ကြောင့်၊ ရုတ်တရက်ပြိုလဲပျက်စီးမှု fall down မဖြစ်စေရန်၊ တားဆီးပေးပါတယ်။
hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor တို့မှာ external impact ဖြစ်ပေါါတဲ့နေရာအပေါါ မူတည်ပြီး၊ safety valve ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ကွာခြားပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ ထိပ်ဖက် cylinder head မှ external impact ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ critical pressure သို့မဟုတ် abnormal high-pressure fluid ဟာ၊ hydraulic circuit မှတဆင့် safety valve ရဲ့ port "A" သို့သာ၊ ဝင်ရောက်ပါတယ်။ abnormal high-pressure fluid ရဲ့ တွန်းအားကြောင့် valve အတွင်းမှ၊ spool ဟာ ဘယ်ဖက်သို့ရွှေ့သွားပြီး၊ relief port တွေအားလုံးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်၊ tank အတွင်းသို့ high-pressure fluid flow စီးဆင်းသွားပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ အောက်ခြေ cylinder bottom နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ hydraulic circuit ကတော့၊ ပိတ်လျှက် closed position အနေအထားမှာ၊ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
hydraulic cylinder ရဲ့အောက်ခြေ cylinder bottom မှ external impact ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ abnormal high-pressure fluid ကတော့၊ hydraulic circuit မှတဆင့် safety valve ရဲ့ port "B" သို့၊ ဝင်ရောက်ပါတယ်။ abnormal high-pressure fluid ရဲ့ တွန်းအားကြောင့် valve အတွင်းမှ၊ spool ဟာ ညာဖက်သို့ရွှေ့သွားပြီး၊ relief port တွေအားလုံးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်၊ tank အတွင်းသို့ high-pressure fluid flow စီးဆင်းသွားပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ ထိပ်ဖက် cylinder head နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ hydraulic circuit ကတော့၊ ပိတ်လျှက် closed position အနေအထားမှာ၊ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ hydraulic motor တွေမှာလည်း external impact ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ abnormal high-pressure fluid ဟာ၊ motor ရဲ့ လည်ပတ်မှုလားရာ direction of rotation ပေါါ မူတည်ပြီး၊ hydraulic circuit မှတဆင့် safety valve ရဲ့ port "A" သို့မဟုတ် port "B" သို့၊ ရွှေးချယ်ဝင်ရောက်ပါတယ်။
Fig. Peak pressure
hydraulic cylinder ဟာ excessive load ကြောင့် hydraulic circuit မှာ abnormal high-pressure fluid ဖြစ်ပေါါစဉ် သို့မဟုတ် hydraulic cylinder ဟာ အဆုံးအနေအထား stroke end position သို့ရောက်ရှိ သွားတဲ့အတွက် abnormal high-pressure fluid ဖြစ်ပေါါစဉ်၊ safety valve မှ high-pressure fluid ကို relief အနေနဲ့မလျှော့ချခင်အချိန်အခိုက်အတန့်မှာ၊ 'set pressure' ပမာဏထက် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ pressure တန်ဖိုးတခု၊ ပေါါပေါက်လာပြီး 'surge pressure' လို့ခေါါပါတယ်။ hydraulic motor တွေမှာလည်း excessive load ကြောင့် surge pressure ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ surge pressure ကြောင့် hydraulic circuit အတွင်းမှ components တွေမှာ 'cavitation' ဖြစ်ပေါါနိုင်သလို၊ hydraulic fluid flow ကို အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အတွက်၊ control valve တွေရုတ်တရက် ပိတ်ဆို့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် valve ပွင့်စဉ်၊ hydraulic fluid flow ဟာ high pressure side အခြမ်းမှ low pressure side အခြမ်းသို့၊ ရုတ်တရက် စီးဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။
(၂) - Flow control valve - pressure-compensated flow control valve, quick drop valve တို့ဟာ flow control valve တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ flow control valve တွေဟာ hydraulic circuit အတွင်းမှာ load အပြောင်းအလဲ ရှိနေပေမယ့် circuit အတွင်းမှ hydraulic fluid ကို၊ constant flow rate ဖြင့် တသမတ်တည်း စီးဆင်းနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
hydraulic circuit အတွင်းမှ fluid စီးဆင်းမှုမရှိခင်၊ spring force ဖြင့် flow control valve ဟာ closed position အနေအထားဖြင့်၊ ပိတ်မြဲပိတ်နေပါတယ်။ hydraulic circuit အတွင်းမှ fluid ဟာ၊ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ flow direction အတိုင်း၊ valve အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ port 'A', 'B' နဲ့ 'C' တို့အားလုံး ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ large flow rate ပမာဏဖြင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ flow control valve မှာ rusting အနေနဲ့ သံချေးတက်နေခြင်းနဲ့ existence of foreign matters ဆိုတဲ့ အရာဝထ္တု တခုခုဝင်ရောက်ပြီး၊ ပိတ်ဆို့နေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါါနေပါက၊ hydraulic fluid ဟာ valve ရဲ့ port 'B' မှသာ၊ restricted flow အဖြစ် ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
hydraulic circuit အတွင်းမှ fluid ဟာ၊ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် flow direction အတိုင်း၊ valve အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့၊ flow control valve ဟာ closed position အနေအထားဖြင့်၊ ပိတ်မြဲပိတ်နေပြီး၊ port 'B' မှသာ၊ restricted flow အဖြစ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ flow control valve မှာ rusting အနေနဲ့ သံချေးတက်နေခြင်းနဲ့ existence of foreign matters ဆိုတဲ့ အရာဝထ္တုတခုခုဝင်ရောက်ပြီး၊ ပိတ်ဆို့နေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါါနေပါက၊ port 'A', 'B' နဲ့ 'C' တို့အားလုံး ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ fluid flow rate ကို control အဖြစ်ထိမ်းသိမ်းလို့မရရှိတော့ပဲ၊ free flow rate အနေနဲ့သာ စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
Pressure compensated flow control valve - hydraulic pump အထွက် discharge မှရရှိလာတဲ့ fluid ရဲ့ total flow rate "Q" ဟာ၊ flow control valve အတွင်းမှ return spring ရဲ့ force ထက်ပိုများမှသာ၊ valve ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ flow control valve အတွင်းမှ orifice ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor သို့စီးဆင်းဝင်ရောက်မယ့် flow rate ကို "Q1" လို့သတ်မှတ်ပြီး၊ valve shoulder နဲ့ drain hole တို့မှတဆင့် hydraulic tank သို့ drain အဖြစ် return အနေနဲ့ စီးဆင်း ဝင်ရောက်မယ့် flow rate ကိုတော့ "Q2" လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ flow rate "Q1" ဟာ orifice ကို ဖြတ်သန်းစဉ် differential pressure (P1 - P2) ပေါါပေါက်ပါတယ်။ differential pressure (P1 - P2) နဲ့ return spring ရဲ့ force တို့ဟာ balance အနေနဲ့ ညီမျှနေစဉ်၊ valve ရွှေ့လျှားမှု၊ မရှိပဲ closed position မှာသာရပ်တန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ flow control valve အတွင်းမှ return spring ရဲ့ pre-load အဖြစ် ချိန်ညှိထားတဲ့ set pressure ဟာ differential pressure (P1 - P2) နဲ့ return spring ရဲ့ force တို့ဟာ balance အနေနဲ့ ညီမျှနေစဉ်၊ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် pressure နဲ့ တူညီနေခဲ့လျှင်၊ drain hole ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ hydraulic fluid ဟာ "Q2" အနေနဲ့ hydraulic tank သို့ စီးဆင်းသွားပါတယ်။
Fig. Pressure compensated flow control valve
အကယ်၍ flow control valve အတွင်းမှ orifice ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းမယ့် flow rate "Q1" မြင့်တက် လာတဲ့အခါ၊ differential pressure (P1 - P2) လိုက်ပါမြင့်တက်လာပြီး၊ valve ဟာ ညာဖက်သို့ရွှေ့လျှားသွားကာ၊ drain hole လည်း ပိုမိုပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ orifice ကိုဖြတ်သန်း စီးဆင်းမယ့် flow rate ဟာ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor သို့စီးဆင်းဝင်ရောက်မယ့် flow rate ထက်ပိုများမှသာ၊ drain hole အတွင်းသို့ စီးဆင်းဝင်ရောက်သွားမယ့် fluid ကို၊ recover အနေနဲ့ အစားထိုးနိုင်ပြီး၊ standard "Q1" ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ orifice ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းမယ့် flow rate လျှော့နည်းနေခဲ့လျှင်၊ differential pressure (P1 - P2) လည်းလိုက်ပါကျဆင်းပြီး၊ valve ဟာ ဘယ်ဖက်သို့ရွှေ့လျှားသွားတဲ့အတွက်၊ drain hole အနည်းငယ်သာ၊ ပွင့်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် flow control valve မှ drain hole အတွင်းသို့ စီးဆင်းဝင်ရောက်သွားမယ့် fluid ကို restrict fluid flow အဖြစ် စီးဆင်းစေပြီး၊ 'compensated' အနေနဲ့ အစားထိုးနိုင်မှသာ၊ standard "Q1" ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
load pressure "P2" မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ orifice ရဲ့ထိပ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့ pressure "P1" လည်း၊ လိုက်ပါမြင့်တက်ပြီး differential pressure (P1 - P2) ဟာ အပြောင်းအလဲမရှိ unvaried အနေအထားဖြင့် constant flow rate ကိုစီးဆင်းစေတဲ့အတွက် 'pressure compensated flow control valve' လို့ခေါါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ pressure compensated flow control valve မှာ load pressure "P2" ရရှိစေဖို့အပြင် pressure "P1" ပါလိုက်ပါမြင့်တက်စေဖို့ back pressure ရရှိစေမယ့်၊ throttled passage ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ load pressure "P2" ဟာ valve မှ throttled passage ကိုဖြတ်စီးစဉ်၊ pressure compensated flow တခုဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ back pressure ဖြင့်၊ လုံလောက်တဲ့ standard "Q1" ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Reference and image credit to : ကိုတင်မင်းထူး၊ "Unit Instruction Manual - Hydraulic Control Valves" - KOMATSU
Posted by ကိုထွန်း at 18:56 1 comment:
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှ 'ကိုတင်မင်းထူး' က "Hydraulic Control Valve" ဆိုတဲ့ Instruction Manual စာအုပ်တအုပ်၊ ဖိုရမ်မှာ တင်ပေးပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ သမရိုးကျ hydraulic ဆိုင်ရာ အခြားစာအုပ်တွေနဲ့ မတူပဲ၊ ရှင်းလင်းလွယ်ကူတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှ အချက်အလက်တွေကို ကိုးကားပြီး၊ ပြန်လည်ဖော်ပြဖို့ရည်ရွယ်ထားသလို၊ ရှာဖွေကာစာအုပ်ပေးပို့တဲ့ 'ကိုတင်မင်းထူး' ကိုလည်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fig. Hydraulic control valve
hydraulic pump မှတဆင့်ရလာတဲ့ hydraulic pressure ကို၊ hydraulic cylinders တွေနဲ့ hydraulic motors တွေရွှေ့လျှားလည်ပတ်ရန်၊ မောင်းနှင်အသုံးပြုရာမှာ၊ လုံလောက်တဲ့ flow rate နဲ့ flow direction တို့လိုအပ်ပြီး၊ hydraulic control valves တွေမှဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ hydraulic control valves တွေကို တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းပုံ structure နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ function တို့အရ၊ (၁) - pressure control valve၊ (၂) - flow control valve နဲ့ (၃) - directional control valve ဆိုပြီးခွဲခြား၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. Relief valve
(၁) - pressure control valve - pressure relief valve နဲ့ safety valve တို့ဟာ pressure control valve တွေဖြစ်ပြီး၊ pressure relief valve တွေကို၊ poppet type relief valve, spool type relief valve နဲ့ pilot type relief valve ဆိုပြီး၊ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ relief valve တွေဟာ hydraulic circuit အတွင်းမှ pressure ကို constant pressure အဖြစ် တည်ငြိမ်နေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ hydraulic circuit အတွင်းမှာ pressure မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ အလိုအလျှေက်ပွင့်သွားခြင်းဖြင့်၊ hydraulic fluid ရဲ့ pressure ကို၊ မူလ ချိန်ညှိထားတဲ့ 'set pressure' အတိုင်းသာ ရှိနေစေရန် ထိန်းပေးတယ်လို့၊ ယေဘုယျ အနေနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ relief valves တွေကို၊ အသုံးပြုပုံ application အရ၊ pressure regulating valve, emergency relief valve နဲ့ safety valve ဆိုပြီးထပ်မံ၊ ခွဲခြားကြပါသေးတယ်။
'pressure relief valve' ဟာ အထက်မှာဆိုခဲ့သလို၊ hydraulic circuit အတွင်းမှာ pressure မြင့်တက် လာတဲ့အခါ၊ အလိုအလျှောက်ပွင့်သွားခြင်းဖြင့်၊ hydraulic fluid ရဲ့ pressure ကိုမူလချိန်ညှိထားတဲ့ 'set pressure' အတိုင်းသာ ရှိနေစေရန်ထိန်းပေးတဲ့ valve ဖြစ်ပါတယ်။ 'emergency relief' valve ကတော့ normally closed အနေအထားဖြင့်၊ အမြဲပိတ်နေတဲ့ valve ဖြစ်ပြီး၊ hydraulic circuit အတွင်းမှ အစိတ်အပိုင်း တခုခုကြောင့် impact အနေနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ abnormal high pressure သက်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ hydraulic fluid ရဲ့ pressure ကိုလျှော့ချပေးမယ့် valve ဖြစ်ပါတယ်။ 'safety valve' ဟာလည်း hydraulic circuit အတွင်း၊ excessive pressure အနေနဲ့ မြင့်မားလွန်းတဲ့ pressure ပေါါပေါက်လာတဲ့အခါ၊ circuit အတွင်းမှ အစိတ်အပိုင်း devices and parts တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မဖြစ်ပေါါစေရန်၊ hydraulic fluid ရဲ့ pressure ကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်၊ တားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Fig. Spring-loaded relief valve
relief valves တွေဟာ 'spring-loaded valves' တွေဖြစ်ပြီး၊ valve အပေါါမှ သက်ရောက်နေတဲ့ spring force ဖြင့် valve seat အပေါါမှာ normally close contact အဖြစ်၊ အထိုင်ချထားတဲ့ valves တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ valve အတွင်းသို့ opposite hydraulic fluid pressure ဝင်ရောက်လာပေမယ့်၊ spring fore ထက်လျှော့နည်းတဲ့အခါ၊ valve ဟာ ပိတ်မြဲပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ opposite hydraulic fluid pressure ဟာ spring fore ထက်ပိုများပြီး၊ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ valve ပွင့်သွားမှာဖြစ်သလို၊ pressure ထပ်မံမြင့်တက်လာခြင်းကိုလည်း၊ တားဆီးပေးပါတယ်။
Fig. Poppet type relief valve
Poppet type relief valve - set screw မှာ သေးငယ်တဲ့ small hole အပေါက် (၁) ပေါက်ကို ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ hydraulic circuit အတွင်း pressure မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် valve ရွှေ့လျှားရာမှာ အလုံပိတ် enclosed spring housing အတွင်းမှာရှိနေမယ့် hydraulic fluid သို့မဟုတ် လေတို့ကြောင့် restrict အနေနဲ့ အတားအဆီးဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ set screw မှ သေးငယ်တဲ့ small hole ဟာ enclosed spring housing အတွင်းမှာရှိနေမယ့် hydraulic fluid သို့မဟုတ် လေတို့ကို relieve အဖြစ် ဖြေလျှော့ကာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်၊ valve ဟာလည်း ချောမွေ့လွယ်ကူစွာ smooth movement ဖြင့်ရွှေ့သွားနိုင်ပါတယ်။
hydraulic circuit အတွင်းမှ fluid pressure ဟာ၊ စတင်မြင့်တက်လာပြီး၊ ဖိထားတဲ့ spring force ထက် ပိုများလာတဲ့အခါ၊ valve ဟာ crack open အနေနဲ့ အနည်းငယ်စတင်ပွင့်ပါတယ်။ valve ဟာ crack open position ဖြင့် high-pressure fluid ကိုစတင်လျှော့ချသလို၊ fluid pressure ဟာ continuous အနေနဲ့ ဆက်လက်မြင့်တက်နေသမျှ၊ ပိုမိုပွင့်ပြီး high-pressure fluid ကိုဆက်လက်လျှော့ချကာ၊ fluid pressure မြင့်တက်လာမှု ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အထိ လျှော့ချနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Set pressure and Crack pressure
valve မှ fluid pressure မြင့်တက်လာမှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အထိ၊ လျှော့ချသွားတဲ့ pressure ကို 'set pressure' လို့ခေါါပြီး၊ ဖိထားတဲ့ spring force ထက်ပိုများလာတဲ့အခါ၊ valve ဟာ crack open အနေနဲ့ အနည်းငယ် စတင်ပွင့်တဲ့ pressure ကို 'crack pressure' လို့ခေါါပါတယ်။ set pressure ဟာ crack pressure ပမာဏထက် ပိုများသလို၊ valve မှ relief အနေနဲ့ လျှော့ချပေးတဲ့ hydraulic fluid ရဲ့ စီးဆင်းမှု flow rate ပမာဏဟာလည်း၊ ကွာခြားပါတယ်။ set pressure ဟာ relief fluid flow rate နဲ့ဆက်စပ်နေပြီး၊ ရိုးရှင်းတဲ့ ordinary hydraulic circuit တွေမှာ၊ relief valve ရဲ့ set pressure ဟာ hydraulic pump မှ discharge pressure တခုလုံးကိုပါ၊ လျှော့ချပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ လုံးပတ် diameter အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ 'poppet type relief valve' တွေမှာ 'set pressure' နဲ့ 'crack pressure' ပမာဏတို့ဟာ၊ ကွာခြားမှုမရှိပဲ hydraulic circuit အတွင်းမှ pressure မြင့်တက်လာလာမယ့် fluid ကို၊ fixed relief flow rate ဖြင့်စီးဆင်းစေကာ၊ လျှော့ချပေးပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ 'poppet type relief valve' တွေမှာတော့ 'set pressure' နဲ့ 'crack pressure' ပမာဏတို့အကြားမှာ၊ ကြီးမားတဲ့ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
Fig. Spool type relief valve
Spool type relief valve - hydraulic circuit အတွင်းမှ fluid pressure ဟာ၊ relief valve ရဲ့ piston သို့ သက်ရောက်နေပြီး၊ spring fore ထက်လျှော့နည်းတဲ့အခါ၊ piston ဟာရွှေ့လျှားမှုမရှိတဲ့အတွက်၊ valve ဟာ ပိတ်မြဲပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ opposite hydraulic fluid pressure ဟာ spring fore ထက် ပိုများပြီး၊ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ piston ရွှေ့လျှားမှုဖြစ်ပေါါပြီး၊ valve ပွင့်သွားမှာဖြစ်သလို၊ pressure ထပ်မံမြင့်တက်လာခြင်းကိုလည်း၊ တားဆီးပေးပါတယ်။
Fig. 'spool type relief valve' diameter & 'poppet type relief valve' diameter
opposite hydraulic fluid pressure ရဲ့တွန်းအားမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ၊ piston ပိုမိုရွှေ့လျှားသလို valve မှ relief port ဟာလည်း၊ ပိုမိုပွင့်လာပြီး၊ relief flow rate လည်းမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ 'spool type relief valve' တွေမှာတော့ 'set pressure' နဲ့ 'crack pressure' ပမာဏတို့အကြားမှာ၊ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ 'poppet type relief valve' တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ valve diameter အရွယ်အစား ပိုမိုကြီးမားတဲ့အတွက်၊ relief flow rate မြင့်မားပြီး၊ 'set pressure' နဲ့ 'crack pressure' တို့အကြား၊ ကွာခြားမှုပမာဏဟာ၊ နည်းပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Pilot type relief valve - pilot valve တလုံးကို၊ main valve ဖြင့်တွဲဖက်တတ်ဆင်ကာ၊ relief valve အဖြစ် အသုံးပြုပြီး၊ high-pressure fluid ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ main valve မှာသက်ရောက်နေတဲ့ hydraulic circuit မှ fluid pressure အနည်းငယ် slight quantity ပမာဏကို၊ pilot valve သို့ပေးသွင်းပြီး၊ pilot valve ရဲ့ ရွှေ့လျှားမှုမှတဆင့်၊ main valve မှ relief port အား ပွင့်စေကာ၊ high-pressure fluid ကို၊ များပြားတဲ့ large quantity ပမာဏဖြင့်၊ လျှော့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Pilot type relief valve
valve အတွင်းသို့ opposite hydraulic fluid pressure ဝင်ရောက်လာပေမယ့်၊ spring fore ထက်လျှော့နည်းတဲ့အခါ၊ main valve ကိုဖိထားတဲ့ spring force ကြောင့်ရွှေ့လျှားမှုမရှိပဲ relief port ဟာ၊ closed position ဖြင့် ပိတ်မြဲပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ main valve အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ opposite hydraulic fluid pressure ဟာ pilot valve အတွင်းသို့လည်း၊ ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ opposite hydraulic fluid pressure ဝင်ရောက်လာပေမယ့်၊ pilot valve ရဲ့ spring fore ထက်လျှော့နည်းတဲ့အခါ၊ valve ဟာ ပိတ်မြဲ ပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
balanced hole ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ hydraulic fluid flow စီးဆင်းမှု မရှိတဲ့အခြေအနေမှာ၊ main valve ရဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာညီမျှစွာသက်ရောက်နေတဲ့၊ balanced pressure ကြောင့် valve ရွှေ့လျှားမှုမဖြစ်ပေါါပဲ၊ relief port ဟာလည်း၊ ပိတ်နေပါတယ်။ hydraulic circuit အတွင်း fluid pressure စတင် မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ pilot valve ဟာ balanced မှတဆင့် relief fluid ကိုစတင်စီးဆင်းစေပါတယ်။ main valve ရဲ့ တဖက်မှာရှိတဲ့ balanced hole မှာ fluid pressure မြင့်တက်လာကာ၊ spring fore ထက် ပိုများပြီး၊ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ main valve စတင်ပွင့်သလို၊ relief port မှတဆင့် high-pressure fluid ကို စီးဆင်းစေပါတယ်။ fluid pressure ဆက်လက်မြင့်တက်နေသမျှ၊ relief port ပိုမိုပွင့်ပြီး high-pressure fluid ကိုဆက်လက်လျှော့ချကာ၊ fluid pressure မြင့်တက်လာမှု ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အထိ၊ လျှော့ချနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
pilot type relief valve တွေမှာ ပေါါပေါါက်တဲ့ set pressure နဲ့ crack pressure တို့အကြား၊ ကွာခြားမှုဟာ၊ အခြား relief valve တွေဖြစ်တဲ့ poppet type နဲ့ spool type relief valve တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ ကွာခြားမှုပမာဏ အနည်းဆုံးဖြင့် hydraulic circuit ကို quick regulating အနေနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ထိမ်းသိမ်းပေးနိုင်တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Adjustment of relief valve set pressure by 'shim'
Adjustment of relief valve set pressure - relief valve ရဲ့ set pressure ကိုတိုးမြှင့်ချိန်ညှိတဲ့အခါ၊ crack pressure လည်း increase အနေနဲ့ လိုက်ပါ တိုးမြင့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ set pressure တိုးမြှင့်ချိန်ညှိခြင်းဟာ valve ရဲ့ closing position အပိတ် အနေအထားမှ spring ရဲ့ pre-load ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တနည်းအားဖြင့် spring ကိုတွန်းထားမယ့် 'shim' အပြားရဲ့ အထူ thickness ကိုလျှော့ချခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် spring ကို တွန်းထားမယ့် shim အပြားရဲ့ အထူ thickness ကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်၊ relief valve ရဲ့ set pressure ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Fig. Adjustment of relief valve set pressure by 'set pressure adjustment screw'
အချို့ relief valve တွေရဲ့ set pressure တိုးမြှင့်ခြင်းအား၊ spring ကိုတွန်းထားမယ့် shim အပြားရဲ့ အထူ thickness ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်စရာမလိုပဲ၊ lock nut ဖြင့်တတ်ဆင်ထားတဲ့ relief valve မှ 'set pressure adjustment screw' ကိုလျှော့ချကာ၊ spring ရဲ့ pre-load ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Measurement of set pressure - set pressure ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ hydraulic circuit ရဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ application အရ၊ open loop system နဲ့ closed loop system တို့အပေါါ မူတည်ပြီး၊ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ 'open loop system' ဆိုတာကတော့၊ အသုံးပြုပြီး cycle ရဲ့ အဆုံးမှာ၊ ဖိအားနိမ့် unpressurized fluid return အနေနဲ့ hydraulic tank သို့၊ hydraulic fluid ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ system ဖြစ်ပါတယ်။ open loop system မှာ hydraulic pump ရဲ့ outlet နဲ့ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor မှ tank သို့ပြန်လာမယ့် return line တို့အကြားမှာ၊ directional control valve တလုံးကို၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. Open loop system
Fig. Closed loop system
'closed loop system' မှာတော့၊ အသုံးပြုပြီး cycle ရဲ့အဆုံးမှာ၊ fluid return အနေနဲ့ hydraulic tank သို့၊ hydraulic fluid ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိပဲ၊ system အတွင်းမှာသာ၊ ဖိအားမြင့် closed pressurized loop အဖြစ်ရှိနေမယ့် system ဖြစ်ပါတယ်။ closed loop system မှာ hydraulic pump ရဲ့ inlet နဲ့ hydraulic cylinder သို့မဟုတ် hydraulic motor မှ tank သို့ပြန်လာမယ့် return line တို့ကို၊ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
'open loop system' မှ control valve ရဲ့ 'set pressure' ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ hydraulic circuit တခုလုံးကို closed position မှာထားရှိပြီး၊ hydraulic pump ရဲ့ outlet မှရရှိလာတဲ့ fluid pressure ကို relief valve မှ၊ high-pressure fluid အနေနဲ့လက်ခံပြီးမှ၊ relief flow rate တခုဖြင့် မလျှော့ချခင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာ၊ ဖတ်ယူပါတယ်။ 'closed loop system' မှ control valve ရဲ့ 'set pressure' ကိုတိုင်းတာတဲ့ အခါမှာတော့၊ hydraulic cylinder အား အဆုံးအထိ end stroke position ဖြင့်ဆန့်ထုတ်ထားစဉ် သို့မဟုတ် hydraulic motor အား ဝန်အပြည့် full load ဖြင့်လည်ပတ်နေစဉ်၊ relief valve မှာ၊ ဖတ်ယူပါတယ်။ hydraulic fluid ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ambient temperature အပူရှိန်ပေါါမူတည်ပြီး၊ စေးပျစ်မှု viscosity ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ambient temperature နိမ့်တဲ့အခါ၊ hydraulic fluid ရဲ့ temperature လည်းလိုက်ပါကျဆင်းပြီး၊ စေးပျစ်မှု viscosity မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်၊ 'set pressure' တိုင်းတာတဲ့အခါ၊ ရရှိလာမယ့် တန်ဖိုးပမာဏ မြင့်မားပါတယ်။ အလားတူ ambient temperature မြင့်မားတဲ့အခါ၊ စေးပျစ်မှု viscosity ကျဆင်းပြီး 'set pressure' တိုင်းတာတဲ့အခါ၊ ရရှိလာမယ့် တန်ဖိုးပမာဏဟာလည်း၊ ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 'set pressure' တိုင်းတာရာမှာ၊ မှန်ကန်တဲ့တန်ဖိုးပမာဏ ရရှိစေရန်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ hydraulic fluid အတွက် သတ်မှတ်ထားသော 'specific temperature range' အတွင်းမှာသာ၊ ဖတ်ယူသင့်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 21:102comments:
Posted by ကိုထွန်း at 04:43 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 01:35 No comments:
သဘေ်ာ main engine ရဲ့ scavenge space မှာမီးလောင်တတ်သလို၊ crankcase မှတဆင့် ပေါက်ကွဲမှုလည်း ဖြစ်ပေါါတတ်ပြီး "crankcase explosion" လို့ခေါါကြပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ engine မှာ crankcase explosion ဖြစ်ပေါါရာမှ piston လိုအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပူလောင်နေတဲ့ lubricating oil တွေ အပြင်ကို လွင့်စင်ထွက်လာပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ စက်ခန်း engine room အတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေအတွက်၊ အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံး၊ ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ engine room မှာပါ မီးလောင်တတ်ပါတယ်။ crankcase explosion ဘယ်ကစလည်းလို့မေးလျှင် crankcase အတွင်း "hot spot" တွေဖြစ်ပေါါရာမှ၊ စတယ်လို့သာဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ hot spot တွေဖြစ်ပေါါလာရတာကတော့ reciprocating movement နဲ့ အထက်နဲ့အောက် အတက်အဆင်းပြုကာလှုပ်ရှားနေတဲ့ piston မှာ temperature မြင့်တက်လာခြင်း၊ bearing temperature မြင့်တက်လာခြင်း၊ leak ဖြစ်နေတဲ့ piston ring တွေမှ blow past ဖြစ်ရာမှတဆင့် spark တွေ crankcase အတွင်းကျလာခြင်းနဲ့ scavenge trunk အတွင်းမီးလောင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အချက်တွေကြေင့်ဖြစ်ပါတယ်။ crankcase explosion ဟာ2stroke engine တွေမှာသာမက၊4stroke engine တွေမှာလည်းဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
crankcase အတွင်းမှ hot spot တွေနဲ့ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်နဲ့ circulate လုပ်နေတဲ့ lubricating oil တို့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ၊ ဆီဟာ vaporized အနေနဲ့အငွေ့ပျံပါတယ်။ vaporized particles တွေဟာ lubricating oil cooler ကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါ၊ atomization action ဖြင့် oil mist လို့ခေါါတဲ့ အဖြူရောင် whit mist တွေဖြစ်ပေါါပြီး၊ engine ရဲ့ crankcase အတွင်းမှ hot spot တွေနဲ့ ထပ်မံထိတွေ့ရာမှတဆင့် မီးထလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်ခြင်းကြောင့် crankcase အတွင်းမှာ သာမန်ထက်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန် temperature နဲ့ ဖိအား pressure ပေါါပေါက်လာပြီး၊ pressure ဟာ maximum permissible limit ကိုကျော်လွန်သွားရာမှ ပေါက်ကွဲမှု explosion ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ crankcase explosion မဖြစ်ပေါါခင်မှာ အရိပ်လဏ္ခာ symptoms တွေပြလေ့ရှိပါတယ်။ exhaust temperature ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခြင်း၊ engine ရဲ့ load ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခြင်း၊ engine မောင်းနှင်လည်ပတ်ပုံ မမှန်တော့ခြင်း၊ engine အတွင်းမှ ထူးခြားတဲ့ဆူညံသံပေါါထွက်လာခြင်းနဲ့ oil mist သို့မဟုတ် whit mist ဖြစ်ပေါါရာမှ ထူးခြားတဲ့အနံ့ တမျိုးပေါါထွက်လာခြင်းစတဲ့ pre-explosion signs လို့ခေါါတဲ့ symptoms တွေကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ pre-explosion signs တွေပြလာခဲ့လျှင် engine ကို slow down လုပ်ကာရပ်ပြီး၊ fuel line နဲ့ supply air line တွေကို ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ indicator cock တွေဖွင့်ကာ turning gear ကို engage လုပ်ပြီး၊ engine ကိုလှည့်ထားရပါတယ်။ တဆက်တည်း cooling efficiency ကိုပေးနိုင် သလောက်ပေးပြီး internal parts တွေကို cooled down လုပ်ကာ အအေးခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ engine အေးနေပြီလို့ ယူဆရတဲ့အခါ၊ crankcase doors တွေကိုဖွင့်ပြီး၊ unit တခုခြင်းအလိုက် inspection အနေနဲ့ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
crankcase explosion မဖြစ်ပေါါစေဖို့အတွက် preventive action အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သင့်တာတွေကတော့ - (၁) - oil mist detector တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ (၂) - temperature လျှော့ချနိုင်ရန် reciprocating movement ဖြင့်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအတွင်းမှာ proper lubricating ချောဆီ လုံလုံလောက်လောက် ရရှိစေခြင်း၊ (၃) - temperature လျှော့ချနိုင်ရန် white metal materiel bearings တွေကိုအသုံးပြုခြင်း၊ (၄) - engine ကို over loaded ဖြစ်တဲ့အထိ အသုံးမပြုခြင်း၊ (၅) - crankcase အတွင်းမှ pressure ကိုလျှော့ချနိုင်ရန် pressure relief valves တွေ တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ (၆) - တတ်ဆင်ထားတဲ့ pressure relief valves တွေကို ပုံမှန် pressure test ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ (၇) - pressure relief valves တွေမှာ flame arrestor လို့ခေါါတဲ့ wire mesh တွေ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် crankcase အတွင်း မီးလောင်တဲ့အခါ flame တွေ engine room သို့မရောက်ရှိစေရန် တားဆီးထားခြင်း၊ (၈) - vent pipes တွေကို choke အနေနဲ့ပိတ်ဆို့ မနေစေရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ (၉) - crankcase အတွင်းမီးလောင်မှုမှ explosion အဆင့်အထိ ကူးစက်မသွားစေရန် CO2 နဲ့ inert gas system ကဲ့သို့ fixed fire extinguishing system တွေကို၊ crankcase အတွင်း တတ်ဆင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Fig.2door type spring loaded self-closing pressure relief valve
crankcase အတွင်းမှ pressure ကိုလျှော့ချနိုင်ရန် pressure relief valve အဖြစ်၊ spring loaded self-closing valves တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။2stroke slow speed engine တွေမှာ2door type spring loaded self-closing pressure relief valve တွေကို cylinder unit တိုင်းရဲ့ crank case doors တွေတိုင်းမှာ တတ်ဆင်ထာပြီး၊4stroke medium speed engine တွေမှာတော့ relief valve တလုံးခန့်သာ တတ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ spring loaded self-closing valve ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ တည်ဆောက်ပုံအရ ပြင်ပမှ atmospheric air ကို crank case အတွင်းသို့၊ မဝင်ရောက်စေရန် တားဆီးပေးထားနိုင်ပါတယ်။ valve seat ကို spring နဲ့တွဲကာ၊ အလုံပိတ် enclosed arrangement အနေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး၊ assembly တခုလုံးကို crank case door မှာ တတ်ဆင်ကာ၊ ပြင်ပမှ safe guard ဖြင့်ကာရံထားပါတယ်။
crank case အတွင်း မီးလောင်ခြင်းကြောင့်ဖိအားမြင့်တက်ကာ pressurized ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ sparing ဖြင့်ဖိထားတဲ့ valve ဟာကြွတက်လာပြီး၊ pressure ကို engine အပြင်ဖက် atmosphere ထဲသို့၊ ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဖိအားကို pressure reduce အနေနဲ့လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ crank case အတွင်းထဲမှာ pressure ကျသွားတဲ့အခါ spring မှ valve ကိုမူလနေရာသို့ပြန်လည်တွန်းပို့လိုက်ပါတယ်။ oil-wetted gauze လို့ခေါါတဲ့ flame arrestor ဇကာတွေကို engine room ဖက်မှာတတ်ထားပါတယ်။ flame arrestor ဟာ crank case အတွင်းမှ မီးတောက်၊ မီးစ flame တွေ engine အပြင်ဖက်သို့ ထွက်မလာနိုင်စေရန် flame trap သဘောမျိုးဖြင့် တားဆီးပေးပါတယ်။ အပြင်ကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ relief valve တွေအတွင်းမှ spring တွေပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိနဲ့ oil-wetted gauze ဇကာတွေ corrosion ဖြစ်ပြီးပေါက်ပြဲနေခြင်း ရှိမရှိတို့ကို၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. operating level of oil mist
crankcase explosion ဟာ engine အတွင်း oil mist တွေဖြစ်ပွားရာမှ စတင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမယ့်၊ လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအကြား ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ lubricating oil တွေမှာ မြင့်မားတဲ့ high temperature အပူရှိန်အမြဲရှိနေပြီး၊ oil mist လို့ခေါါတဲ့ အဖြူရောင် whit mist တွေ အမြဲတမ်းပေါါပေါက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ oil mist ဖြစ်ပေါါမှု density ပေါါမူတည်ပြီး၊ ပမာဏများမှသာ crankcase explosion ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် oil mist ရဲ့ သိပ်သည်းဆ density (0 ~ 1.99 mg/ Lit) ပမာဏကို ပုံမှန် working level အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ (1.99 ~ 50 mg/ Lit) ပမာဏကိုတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ danger level အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ၊ (50 mg/ Lit) ပမာဏအထက် ဆိုရင်တော့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ explosive level အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ oil mist ရဲ့ သိပ်သည်းဆ density မြင့်တက်မှုပေါါပေါက်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေကို (၁) - ဖိအားမြင့်ကာ pressurized ဖြစ်နေတဲ့ lubricating piping system မှာ vibration ကြောင့် fittings တွေချောင်ထွက်ပြီး၊ atomized spray အနေနဲ့ lubricating oil ဟာအပြင်ဖက်သို့ ပန်းထွက်လာခြင်းနဲ့ (၂) - lubricating oil ဟာ သာမန်ထက်ထူးထူးကဲကဲ အပူချိန်မြင့်နေတဲ့နေရာမှ hot spot တွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီး၊ ဆူပွက်ကာ boiling ဖြစ်ပေါါခြင်း ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
air ဆိုတဲ့ လေ တနည်းအားဖြင့် အောက်စီဂျင်၊ fuel လောင်စာနဲ့ ignition မီးစ ဒါမှမဟုတ် heat အပူတို့ ပေါင်းဆုံရာမှ မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါါတယ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားကြပေမယ့် အလုံပိတ် enclosed space အဖြစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ engine ရဲ့ crankcase အတွင်းသို့၊ ပြင်ပလေ အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်နေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အောက်စီဂျင်ပမာဏဟာ နည်းပါးပါတယ်။ crankcase အတွင်း မီးလောင်ခြင်းဟာ hot spot လို့ခေါါတဲ့ သာမန်ထက်အပူချိန် ပိုများတဲ့နေရာတွေမှတဆင့် ပေါါပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ engine အတွင်း hot spot ရဲ့အပူချိန် (200ိC) ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ၊ ထိတွေ့မိတဲ့ lubricating oil အငွေ့ပျံပြီး၊ cooler ကိုဖြတ်ကာ၊ (5 ~ 10) micron အရွယ်အစားရှိတဲ့ white oil mist တွေအဖြစ်၊ engine အတွင်းသို့ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ oil mist ရဲ့ concentration ဟာ (50 mg/ Lit) သို့မဟုတ် oil mist - air ratio (13) % ခန့်ရှိလာခြင်းကို lower explosive level လို့ခေါါပါတယ်။ oil mist ဟာ (850ိC) အပူချိန်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ignition စတင်ဖြစ်ပေါါသလို၊ တခါတရံမှာတော့ crank case အတွင်းသို့ blow past ဖြစ်ရာမှတဆင့် ignition ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
ရှည်မျောမျော crank path ပုံစံမျိုးတည်ဆောက်ထားတဲ့ engine တွေမှာ crankcase explosion ပိုဖြစ်လေ့ ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ engine design ပုံစံအနေအထားတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြပြီး၊2stroke engine တွေရဲ့ crankcase volume ကို 500 cu-meter အထက် အရွယ်အစားအနေနဲ့ တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ crankcase explosion ဟာအဆင့် (၂) ဆင့်နဲ့ဖြစ်ပေါါပြီး 'primary explosion' နဲ့ 'secondary explosion' လို့ခါါဆိုကြပါတယ်။ explosion ဖြစ်တဲ့အခါ၊ မီးတောက် flame ဟာ အရင်ဆုံးရှေ့မှာပေါါပေါက်လာပြီး၊ crankcase ရဲ့အောက်ဖက်သို့ထိုးဆင်းပါတယ်။ flame နဲ့အတူ pressure wave တခု ဖြစ်ပေါါလာပြီး pressure wave သို့မဟုတ် turbulence ရဲ့မြင့်မားတဲ့ အရှိန်အဟုန်ကြောင့် လည်ပတ်မောင်းနှင်နေတဲ့ engine အစိတ်အပိုင်းတွေ ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားသွားပြီး၊ oil mist vapor တွေ ပိုမိုပေါါပေါါက်လာခြင်းကို primary crankcase explosion အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပိုမိုပေါါပေါါက်လာတဲ့ oil mist vapor တွေကြောင့် flame ပိုမိုကြီးမားလာပြီး၊ flame ရဲ့ ရှေ့မှ pressure wave ကို ပိုမိုမြင့်မားစေပါတယ်။ pressure မြင့်တက်လာတဲ့အခါ vent valve တွေမှတဆင့် vent လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်၊ အပြင်ဖက်သို့ flame ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် pressure ကို release လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ pressure release လုပ်ပြီးတဲ့အခါ valve seal ဟာ မူလနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ relief valve ပြန်မပိတ်ခဲ့လျှင် crankcase အတွင်းမှ pressure ဟာ atmosphere pressure ထက်လျှော့နည်းသွားပြီး၊ ပြင်ပလေဟာ crankcase အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
Fig. explosion pressure/ time variation
ပြင်ပလေဟာ flammable mixture တွေနဲ့ပေါင်းစပ်သွားတဲ့အခါ၊ နောက်ထပ် explosion တခု crankcase အတွင်းပေါါပေါက်လာပြီး secondary explosion လို့ခေါါဆိုကြပါတယ်။ secondary explosion ဟာ crankcase door ကိုပွင့်ထွက်သွားစေနိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ relief valve ဟာ pressure ကို release မလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်၊ secondary explosion အဆင့်သို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိ သွားနိုင်ပါတယ်။ crankcase door ပွင့်ထွက်သွားရာမှ တဆင့်၊ engine room မီးလောင်မှုပါ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ crankcase explosion ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို၊ လက်လမ်းမှီသလောက် လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ PTO gear box bearing မှာ hot spot ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်း၊ piston cooling oil inlet pipe ပြုတ်ထွက်ရာမှ တဆင့် ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်း၊ stuffing box မှ spring တွေကို လွဲမှားစွာတတ်ဆင်ခဲ့ခြင်း၊ piston rod နဲ့ cylinder frame တို့ ထိတိုက်မိရာမှ ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်း၊ timing chain tightener ပြုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်း၊ main bearing မှာ hot spot ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်း၊ cam shaft bearing မှာ hot spot ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်း၊ crank pin bearing မှာ hot spot ဖြစ်ပေါါခဲ့ခြင်းနဲ့ piston crown ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
Reference and Image Credit : Marine Auxiliary Machinery, 7th Edition, 1995 by Mc George, http://www.marinelighting.ca/, http://www.machineryspaces.com/
Posted by ကိုထွန်း at 22:25 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 02:09 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 19:32 1 comment: